Nepalistudio » स्वस्थानी व्रतकथा, भाग – ७ (दक्षसेना बधवर्णन) स्वस्थानी व्रतकथा, भाग – ७ (दक्षसेना बधवर्णन) – Nepalistudio
स्वस्थानी व्रतकथा, भाग – ७ (दक्षसेना बधवर्णन)
गणेशाय नमः ।। ॐ नमश्चण्डिकायै ।। श्री सरस्वत्यै नमः ।। श्री स्वस्थानीपरमेश्वर्यै नमः ।।
महादेवबाट आज्ञा भयो – ‘हे महाकाली ! हे वीरभद्र ! तिमीहरू गएर तेत्तीस कोटि देवताद्वारा रक्षा गरिएको पापिष्ठ दक्ष प्रजापतिको यज्ञलाई ध्वंश गरी दक्षको संहार र तेत्तीस कोटि देवताहरूलाई समेत नाश गरी आओ । यसै कारण मैले तिमीहरूलाई आराधना गरेको हुँ ।’ महादेवको आज्ञा सुनेका महाकाली र वीरभद्रले नन्दी, भृङ्गी, विषमज्वर, चतुःषष्ठी योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाचसहित भर्इ मेघ गर्जिए झैं गर्जी, पृथ्वी डोलायमान गराउँदै, यमराज नै आए झैं गरी अति क्रोधले युक्त हुँदै कैलाशबाट दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गरेको ठाउँ कनखलका निम्ति प्रस्थान गरे । तिनीहरूको गर्जनाले गर्दा पृथिवीलाई थाम्न साह्रै गाह्रो भयो र डोलायमान भइन् । सात समुद्र कम्पायमान भयो । जलचर, स्थलचर, यावत प्राणीहरू त्राही त्राही हुन गए । उता दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा पनि अनेकौं उत्पात हुन लागे । ठूलो आँधीबेह्री आई धुलो उडेर अन्धकार छायो । मण्डलाकार गरी कराउँदै उड्न लागेका गिद्ध र कागले आकाश ढाकियो । दुबै आँखा र मुखबाट अलच्छिन दृष्टि र शब्द निकाल्दै कराउँदै स्यालहरू हिंड्न थाले । आकाशबाट रक्तवृष्टि हुनुका साथै वायुदेव पनि उल्टो दिशाबाट बग्न थाले । कहिल्यै नदेखेको र नभोगेको यस्तो उत्पात देखेर यज्ञका वरिपरि रहेकाहरू सबै हाहाकार गरी रोई कराई चारैतिर भाग्न थाले । केटाकेटी, बुढाबुढी, रोगी र गर्भिणीहरू भाग्न नसकी भूइँमा घोप्टो परी रुन र कराउन थाले । यस्तो महाउत्पात देखी देवताहरू पनि आश्चर्यमा परी त्राही त्राही भइरहे । त्यसैबेला गणले सहित भएका महाकाली र वीरभद्र पनि मेघ गर्जे झैं गर्जी हात्तीका वथानमा सिंह पुगे जसरी दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा पुग्दा भए । तहाँ उप्रान्त यज्ञमा रहेका देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य र नागहरूसँग शिवगणको महासङ्ग्राम सुरु भयो ।
उताबाट यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग र दक्षसेनाले छाडेका अस्त्रहरू महाकालीमाथि पर्नासाथ डढेर भष्म भैजान्थे । महाकाली, चतुःषष्ठी योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, पार्थगण आदि एकातिर दक्षसेनासित लड्दै थिए भने अर्कातिर शिवगण मध्येका एक गण विषमज्वरले शत्रुपक्षका सबैका शरीरमा प्रवेश गरी निश्चेष्ट गराए । तब आफ्नापट्टिका सबैको अचेष्टा भएको देखी वैकुण्ठनाथ विष्णुले आफ्ना शरीरबाट शीतज्वरोको उत्पत्ति गर्नुभई सबैलाई होशमा ल्याउनुभयो । यसपछि नाना शस्त्रास्त्र लिई वीरभद्रमाथि जा्र्इ लाग्नुभयो । वीरभद्रले पनि सिंह झैं गर्जिएर त्रिशूल उठाई सुकेका खरमा आगो लागे झैं दक्ष प्रजापतिका कोटिकोटि सेनाहरू एकै क्षणमा नाश गरिदिए । कसैका शिर थिएनन्, कसैका गोडा थिएनन्, कोही लडीबडी गर्दै थिए, कोही छट्पटार्इ रहेका थिए, कोही पानी ! पानी ! भन्दै हप्याकहप्याक भइरहेका थिए, जहाँ हेर्यो त्यहीं रक्तका नाला बगिरहेका थिए, कोही रक्षा गर भन्दै थिए, कोही भाग्दै थिए, कोही भाग्न नसकी भूइँमा पछारिंदै थिए । वीरभद्रद्वारा यस्ता प्रकारले यज्ञविध्वंश गरी भेटे जत्तिलाई समात्दै यज्ञमा होम्दै गरेको देखी भगवान विष्णुले अत्यन्तै क्रोधित हुँदै लाललाल नेत्र गरी नागले झैं सुस्केरा हाली, अग्निको ज्वालाजस्तो रूप लिई, दाहिने हातले कौमोदकी गदा उठाई, बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई संहारकालका महारुद्र झैं भएर वीरभद्रका सेनामाथि जार्इ लागे । यो देखेर सहारा पाई आत्मबल मिलेका देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनाहरूले ‘धन्य धन्य विष्णु ! तपाईंको जय जय होस् ‘ भनी आआफ्ना शस्त्रास्त्र लिएर विष्णुको साथ लिई लड्न थाले । त्यो देखी महाकाली पनि अग्निका ज्वालाजस्तो तेज ज्वाला निकाली चतुःषष्ठी योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच र पार्थगणले सहित भई दायाँ हातले खड्ग उठाई बैरीसित लड्न लागिन् । ठूलो वायु चल्दा टुक्राटुक्रा भई जसरी मेघ फाट्दछ, त्यसरी नै महाकालीले देवता र दक्षसेनाहरूलाई दश दिशामा भगार्इन् ।
त्यो देखी वीरभद्रको छाती ताकी विष्णुले कौमोदकी गदा प्रहार गर्नुभयो । त्यो गदा वीरभद्रको छातीमा लाग्यो र चोट सहन नसकी ती मूर्च्छा परे । त्यसपछि नन्दी, भृङ्गी, चतुःषष्ठी योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच र प्रमथगणलाई विष्णुले पाञ्चजन्य शङ्खको शब्द गरी गदाले प्रहार गर्नुभयो । त्यसका चोटले कोही मूर्च्छा परी भूइँमा लडे, कोही भागाभाग गर्दै परपर पुगे । देवता, यक्ष, गन्धर्व र किन्नरहरूले ‘धन्य विष्णु ! जय होस्, जय होस्’ भन्दै पुष्पवृष्टि गरे । यसरी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग र दक्षप्रजापतिका सेनाहरूले ‘धन्य विष्णु ! धन्य विष्णु !’ भन्दै जयगान गरेको शब्द मूर्च्छामा रहेका महावीर वीरभद्रका कानमा परे, जसले गर्दा उनको मूर्च्छा खुल्न गयो । उठेर हेर्दा आफ्ना सेनाहरू कोही भूमिमा लडेका, कोही भाग्दै गरेका देखी अत्यन्तै क्रोधित भई काल समानको त्रिशूल उठाई विष्णुलाई ताकी बेगले प्रहार गरे । त्यो गएर विष्णुका छातीमा बज्रन पुग्यो, जसको वेदना सहन गर्न नसकी त्यो रणभूमिमा लोटी विष्णु मूर्च्छा पर्नुभयो । यो देखी प्रलयकालको मेघ झैं गर्जी वीरभद्रले दक्षसेनामाथि जार्इ लागी कैयन देवताहरूको संहार गरे । कत्ति देवताहरू वीरभद्रको गर्जना सुनेर त्राही त्राही भन्दै हाहाकार गर्दै जता पायो त्यतै भाग्न थाले । यस तरहको महासङ्ग्राम भएकाले दक्षप्रजापतिका सेनाहरूको नाश हुन गयो । महाकाली र वीरभद्रले देवताहरूमाथि जार्इ लागी कसैका टुप्पी समाती पछारेर खड्ग प्रहार गरी मारे, कसैलाई मुड्कीले हिर्काएर मारे । चतुःषष्ठी योगिनीले पनि कसैलाई निमोठेर मारे, अनि कसैका कोखामा प्वाल पारेर मुख लगाई रक्तपान गर्न लागे त कसैलाई यज्ञमा होमेर मारे । देवताहरूका सेनाहरूको यसरी नाश भएकाले चरैतिर हाहाकार मच्चियो । वीरभद्रका सेनाले जयजयकार गरी आफ्नो विजयको सङ्केत दिन थाले ।
शिवगण कराएको शब्द सुनेर मूर्च्छामा परेका विष्णु ब्युँझनुभयो । महाकाली र वीरभद्रले दक्षको यज्ञ विध्वंश गरी धेरै देवता र दक्षसेनाहरूको संहार गरेको देखी क्रुद्ध भएका विष्णुले भन्नुभयो – ‘हे पापिष्ठ वीरभद्र ! मबाट आज तेरो प्राण लिई दक्षप्रजापतिको यज्ञ पूर्ण हुनेछ, अनि मात्र सम्पूर्ण देवताहरूले सन्तोष मान्लान् । अब एकादश महारुद्र आएर तेरो सहाय भएपनि रक्षा गर्न सक्ने छैनन् ।’ भनी सारा दुष्टहरूको नाश गर्ने आफ्नो सुदर्शन चक्र देखाउनुभयो । विष्णुले भन्नुभएका यी कुराहरू सुनी क्रोधले पूर्ण भएका वीरभद्रले भने – ‘हे विष्णु ! सम्पूर्ण दुष्टहरूको नाश गर्ने चक्र हो भनी मेरो पनि नाश गर्ने कुरा भनिस् । लौ अब तेरा भएभरका पराक्रम बटुलेर त्यो चक्र ममाथि प्रहार गर् । म पनि हेर्नेछु तेरो ताकत !’ वीरभद्रका यस्ता कुरा सुनेर झन् रिसाएका विष्णुले वीरभद्रलाई सुदर्शन चक्र प्रहार गर्नुभयो । त्यो सुदर्शन चक्र कोटी सूर्यजस्तो तेज र प्रलयकालका मेघको जस्तो गर्जनाको शब्द छोड्दै कालरुद्रकै रूपजस्तो भएर गयो । यस तरहले आफूतिर आउ्ँदै गरेको सुदर्शन चक्रलाई देखी नन्दी, भृङ्गी, चतुःषष्ठी योगिनी, भूतप्रेत, पिशाच र प्रमथगणहरूले ‘त्राही त्राही महादेव !’ भन्दै महावीर वीरभद्र र महाकालीका शरणमा गए ।